Shwemyanmar – Page5– Shwe Myanmar
“၄ နှစ်အရွယ်မြေးဖြစ်သူ အားအဖွါးဖြစ်သူ မှရိုက်နှက်ဆုံးမ လက်လွန်သေဆုံး”
“၄ နှစ်အရွယ်မြေးဖြစ်သူ အားအဖွါးဖြစ်သူ မှရိုက်နှက်ဆုံးမ လက်လွန်သေဆုံး” ၁၂.၁၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၀၉၀၀ အချိန်ခန့် တွင် ကော့သောင်းမြို့ ပုလုံးတုံတုံးကျေးရွာ အောင်မေတ္တာ (၂)လမ်းနေ မသန်းသန်းနွယ်(ခ) […]
Posted inမူခင်းသတင်းLeaveaComment on “၄ နှစ်အရွယ်မြေးဖြစ်သူ အားအဖွါးဖြစ်သူ မှရိုက်နှက်ဆုံးမ လက်လွန်သေဆုံး”
KIA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများ ထောင်ထားသည့် မိုင်းများ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီး မော်တော်ယာဉ်များ ထိခိုက်ပျက်စီး
KIA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများ ထောင်ထားသည့် မိုင်းများ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီး မော်တော်ယာဉ်များ ထိခိုက်ပျက်စီး ကချင်ပြည်နယ်၊ ကာမိုင်းမြို့နယ်၊ နန့်ယား ကျေးရွာအုပ်စု၊ […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on KIA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများ ထောင်ထားသည့် မိုင်းများ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီး မော်တော်ယာဉ်များ ထိခိုက်ပျက်စီး
ATM စက်​မှ သိန်း ၅၇၀ ​ကျော်​​ပျောက်​ဆုံးမှု ရှမ်းပြည်​နယ်​ရဲတပ်​ဖွဲ့ မှ ​ဖော်​ထုတ်​နိုင်​
ATM စက်​မှ သိန်း ၅၇၀ ​ကျော်​​ပျောက်​ဆုံးမှု ရှမ်းပြည်​နယ်​ရဲတပ်​ဖွဲ့ မှ ​ဖော်​ထုတ်​နိုင်​ ​တောင်​ကြီးမြို့ဧရာဝတီဘဏ်​ခွဲ၁. မန်​​နေဂျာထံ ရန်​ကုန်​ရုံးချုပ်​မှ Royal Taunggyi. Hotel တွင်​ထားရှိ​သော […]
Posted inမူခင်းသတင်းLeaveaComment on ATM စက်​မှ သိန်း ၅၇၀ ​ကျော်​​ပျောက်​ဆုံးမှု ရှမ်းပြည်​နယ်​ရဲတပ်​ဖွဲ့ မှ ​ဖော်​ထုတ်​နိုင်​
သွေးလှူဒါန်းခြင်း (သို့) လူသားဆန်တဲ့ မြင့်မြတ်မှု
သွေးလှူဒါန်းခြင်း (သို့) လူသားဆန်တဲ့မြင့်မြတ်မှု ***************************** သွေးဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ပါ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်ပတ်နေတဲ့သွေးပမာဏဟာ သာမန်အရွယ်ရောက်ပြီးလူတစ်ယောက်မှာ ၅ လီတာခန့် ရှိပါတယ်။ လည်ပတ်နေတဲ့သွေးပမာဏကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သွေးပမာဏလျော့နည်းသွားပြီဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ သာမန်အနည်းငယ်သွေးထွက်တာ၊သွေးဆုံးရှုံးသွားတာကို ခန္ဓာကိုယ်ကခံနိုင်ပေမယ့်သွေးဆုံးရှုံးမှုများလာတာနဲ့အမျှအန္တရာယ်လည်းပိုကြီးလာပါတယ်။ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သွေးပမာဏကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ဖို့ကအချိန်နဲ့အမျှအရေးကြီးပါတယ်။ သွေးသွင်းဖို့လိုလာပြီဆိုရင်သွင်းမယ့်သွေးကလက်ခံမယ့်သွေးနဲ့အမျိုးအစားတူဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ […]
Posted inသုတရသLeaveaComment on သွေးလှူဒါန်းခြင်း (သို့) လူသားဆန်တဲ့ မြင့်မြတ်မှု
ကချင်ဒေသ တိုက်ပွဲ ရလဒ် ( Update News!)
ကချင်ဒေသ တိုက်ပွဲ ရလဒ် ( Update News!) ================================ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့က KIA စခန်းကုန်း ၄ နေရာကို မြန်မာ့တပ်မတော်မှ […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on ကချင်ဒေသ တိုက်ပွဲ ရလဒ် ( Update News!)
စိတ်ကြွမူးယစ်ဆေးရောင်းသူ သင့်အိမ်နားမှာရှိနေပါသလား ®®®®®®®®®® မြင်းဆေးသုံးတဲ့သူတွေအပြင် ရောင်းတဲ့သူအရေအတွက်ပါ တဟုန်ထိုးကြီးထွားလာရခြင်းဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မသိကျိုးကျွံပြုမှု ဖမ်းဆီးနှိမ်နှင်းရေးအဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းမှုတို့ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ဓလေ့ဗီဇသဘာဝဟာ ခပ်အေးအေးနေချင်ကြပါတယ်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြသနာအတက်မခံချင်ကြပါဘူး။ လူမုန်းမခံချင်ကြပါဘူး။ သူဖြစ်သူခံလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ […]
Posted in​ဆောင်းပါးLeaveaComment on စိတ်ကြွမူးယစ်ဆေးရောင်းသူ သင့်အိမ်နားမှာရှိနေပါသလား
“နေ့နှင့်လများ၏အဓိပ္ပာယ်” နေ့အမည်များ၏အဓိပ္ပာယ် စာသင်ချိန်တခုတွင် ကလေးတယောက်က မရဲတရဲဖြင့်မေးသည်။ ကပ်သီးကပ်တတ် မေးခြင်း မဟုတ်ဘူးဟုလည်း စကားပလ္လင်ခံသည်။ မိမိကမေးခွင့်ပြုလိုက်သည်။ (စကတည်းကလည်း မေးခွင်ပြုထား ပါသည်။ မိမိအတွက်လည်းအကျိုးရှိ သူတပါးလည်းအကျိုးရှိရမည်ဟု […]
Posted inသုတရသLeaveaComment on ​နေ့နှင့်လများ၏အဓိပ္ပာယ်”
ပျောက်ဆုံးစိန်ဖူးတော်ပြန်မတွေ့သေးပဲနဲ့ စိန်ဖူးတော်အသစ် အစားထိုးလှူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း သိချင်သူများဖတ်ပေးကြပါ။
ပျောက်ဆုံးစိန်ဖူးတော်ပြန်မတွေ့သေးပဲနဲ့ စိန်ဖူးတော်အသစ် အစားထိုးလှူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း သိချင်သူများဖတ်ပေးကြပါ။ ————————– အခုတလော သတိထားမိတာက ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ စိန်ဖူးတော်နဲ့ ခိုးတဲ့တရားခံကိုမမိသေးပဲနဲ့ စိန်ဖူးတော် အသစ်ပြန်လှူ ဖို့စီစဉ်နေတာကို မြို့ခံအချို့က သိပ်ပြီးလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုမြင်တွေ့နေရလို့၊စိန်ဖူးတော်အသစ်ပြန်လှူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းလေးကို […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on ပျောက်ဆုံးစိန်ဖူးတော်ပြန်မတွေ့သေးပဲနဲ့ စိန်ဖူးတော်အသစ် အစားထိုးလှူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း သိချင်သူများဖတ်ပေးကြပါ။
ခြေဖ၀ါးကွဲနေလျှင် ========== ရာသီဥတုပူပြင်းခြင်း၊အေးလွန်းခြင်းနှင့်ခြေထောက်မှ ခြေဆီမပြန်ခြင်းတို့ကြောင့် ခြေဖ၀ါးနာခြင်း၊ကွဲခြင်းတို့ဖြစ် တတ်ကြပါသည်။အကျိုးဆက်က ဖိနပ်လည်းမစီးနိုင် သလို လမ်းလည်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တော့ချေ။ အိမ်တွင်းသုံးကုထုံးနည်းလေးဖြင့် ယုံယုံကြည်ကြည်စမ်း သပ်ကြည့်ပါ အံ့ဖွယ်သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ နည်းလမ်းလေးမှာ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် […]
Posted inကျန်းမာ​ရေးLeaveaComment on ​ခြေဖ၀ါးကွဲနေလျှင်
မလေးရှားအစိုးရ ကြေညာချက် ထုတ်လိုက်ပြီ
မလေးရှားအစိုးရ ကြေညာချက် ထုတ်လိုက်ပြီ ======================== မြန်မာအပါအဝင် တရားမဝင်နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများအနေနှင့် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးထားထွက်ခွာရန် မလေးရှားအစိုးရမှ ကြေညာလိုက်သည်။ အဆိုပါ ကြေညာချက်ကို […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on မလေးရှားအစိုးရ ကြေညာချက် ထုတ်လိုက်ပြီ
Previous 1234567 8910 … 90 Next